राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको इतिहासमै अक्षम्य अपराध | GNN Nepal GNN Nepal राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको इतिहासमै अक्षम्य अपराध | GNN Nepal
GNN Nepal जेठ १० २०७९, मंगलबार
नेपाली जनताको शक्तिले यस्ता प्रतिगामीहरुलाई धुलो चटाउनेछ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको यो कदमलाई इतिहासकै अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिएका छन् । जीएनएन नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनीसँग गरिएको कुराकानी विस्तृतमा:
प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि राजनीति नै तरंगित बनिरहेको छ । यहाँको पार्टी पनि विपक्षी गठबन्धनमा नै छ । के हुँदैछ देशमा ?
नेपालमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संसदीय व्यवस्था र संविधान नै च्यातचुत गरेर जनताको अधिकार हनन गरेका छन् । यिनले यही तरिकाबाट मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लगेका छन् ।
संविधान सार्वजनिक दस्तावेज हो । त्यसलाई च्यातचुत पारियो । पुष ५ पछि पनि त्यो हर्कत भएकै हो । त्यसबेला विपक्षी दलहरुको भूमिका पनि निर्णायक देखिएन । अब विपक्षी दलहरु निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्लान ?
निर्णायक भूमिका खेल्नैपर्छ । पुष ५ पछि पनि नेपाली जनता, राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज र मिडिया क्षेत्रको व्यापक दबाबपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेको थियो । अदालतले ओलीको प्रतिगमनलाई बदर गरिदियो । ओलीमा अलिकति पनि नैतिकता थियो भने त्यही दिन नै उनले राजनीनामा दिनुपर्थ्यो । अझ संसदमा जुनसुकै हतकण्ड अपनाएर संसदलाई ‘बिजनेस’ नदिने र फेरि संसद विघटन गरेर उनले षड्यन्त्र गरे । यो असाध्यै कहालीलाग्दो छ । यस्तो षड्यन्त्र अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन ।
यो सबै विपक्षीकै कारणले भएको हो । संसदलाई बिजनेस नदिने पनि विपक्षी, बहुमतको सरकार बनाउनुहोस् भन्दा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने विपक्षी । प्रधानमन्त्रीको आरोप छ अध्यक्ष ज्यू !
त्यो झुटको खेती हो । उनले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न किन सकेनन् ? पुनस्थापित संसदमा उपस्थित नै नहुने, संसदलाई बिजनेस नै नदिनेजस्ता उनले अनैतिक काम गरे । संसद नचल्नुको मुख्य कारण उनको पार्टीभित्रको अन्तरकलह हो । आफ्नो पार्टीमा झगडा गर्ने अनि त्यसको मार जनताले बेहोर्नुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ? मैले विश्वासको मत लिन्न मलाई सरकार चलाउन मन छैन पनि भन्ने अनि राजीनामा नदिने ? सरकार चलाउन नसकेपछि मार्गप्रशस्त गर्ने हो । यो त गलत तरिका भयो ।
यहाँले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
राष्ट्रपतिको यो कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक हो । नेपाली जनताले राजालाई फालेर विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रप्रमुख बनाइसकेपछि यस्तो हर्कत गर्लिन भनेर सोचेका पनि थिएनन् । उनी व्यक्तिको गोटी बनेर नेपालको प्रजातन्त्र खतम पार्ने, संविधान र गणतन्त्र खतम पार्नतर्फ लागिन । उनले राष्ट्रपति पदको मर्यादामा नै आँच पुर्याइन । गरिमामय राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम भयो । हामीले यो आशा गरेका थिएनौं ।
जनतामाथिको यो अपमान कहिलेसम्म ?
जबसम्म अर्ध उपनिवेशी हुन्छ, अर्ध सामन्ती हुन्छ । जहाँ विदेशीको इशारामा चल्ने गरिन्छ । जनता र राष्ट्रप्रति जवाफदेही हुने, आफू खरानी भएर जनताका लागि मरिमेट्ने यो संसदीय प्रणालीमा हुन्न । गणतन्त्र, संविधान ध्वस्त पार्न बाह्य शक्तिहरु लागिरहेका छन् र त्यो डिजाइनअनुसार अहिलेका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखहरु लागिरहेका छन् ।
यहाँले भनेअनुसार पछिल्ला कदमहरु पनि विदेशीकै इशारामा भएका हुन त ?
नेपालको शासन व्यवस्थामा २०७७ साल अघि र त्यसपछि विदेशी शक्तिहरुले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहेका छन् । यो शिलशिला निरन्तर चलिरहेको छ । यो अपराधपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने तिनै जनताका प्रतिनिधिहरु हुन् । त्यो गतिविधिलाई शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो योजनाअनुसार चलाइरहन्छन् ।
सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने मधेशी दलहरु अहिले सत्तामा गएनन् रु नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएपछि उनीहरु ओलीतिर लागेका छन् ।
अपराधपूर्ण गतिविधिमा संलग्न नेतृत्वलाई जनताले सजाय दिन्छन् । त्यो भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनमा जाँदा तपाईहरुलाई केको आपत्ति भन्या ?
नेपाली जनतालाई कसले कैद बनाएको छ भन्नुहोस न रु नेपाली जनताले कति स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न सक्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । अहिले नेपाली जनताले कोरोनाको राम्रो उपचार नपाएर आहाल हुनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई निर्वाचनमा लाने हो रु अहिले त महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण आवश्यक छ । राष्ट्रघाती काम गर्नेहरुलाई नेपाली जनताले ढिलो चाँडो हिसाब किताब गर्नेछन् ।
यदि चुनाव नै गर्ने हो भने को आउँछ ? तिनै राष्ट्रघाती होइनन ? चुनावमा पैसा खर्च गर्ने ठेकेदारहरु, भूमाफियाहरुले नै हो चुनाव जित्ने । चुनावले सच्चा राष्ट्रवादीहरुलाई सधैं पराजित गर्छ । चुनाव देखाउनका लागि मात्र हो ।
तपाईको दलसहितका केही नेताहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि दलबलसहित जानुभयो । नेतृत्वलाई समस्या पर्दा यसरी खुल्लै हिँड्न मिल्ने तर जनतालाई गरिखान पनि नदिने ?
त्यो बाध्यता थियो । प्रतिगमनका विरुद्धमा अदालतमा जानु र जनतामाझ भोट माग्न जानुमा धेरै फरक छ । त्यो त सरकारले व्यवस्था गर्ने कुरा हो । यतिबेला खोप जनतालाई छैन । आफन्तलाई खोप लगायो जनता भेडाबाख्रा झैं मरिरहेका छन् । यसबाट जनतालाई कसरी बचाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बालुवाटारमा बहसै हुँदैन । त्यहाँ त पार्टी र सरकारको कुरा मात्रै हुन्छ ।
यी राजनीतिक परिदृश्यले नेपाली जनताको मानसिक अवस्था गिजोलिएको छ । यो अवस्थाबाट जनतालाई मुक्ति कहिले दिनुहुन्छ ?
नेपाली जनताले आफै लडेर मुक्ति पाउने हो । राणा शासनदेखि राजातन्त्रसम्मलाई जनताले नै फालेका हुन् । अब पनि यिनलाई जनताले ठेगान लगाउने नै छन् । नेपाली जनताको शक्तिले यस्ता प्रतिगामीहरुलाई धुलो चटाउनेछ ।
यो राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको इतिहासमै अक्षम्य बदमासी र षड्यन्त्र हो । नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब ढिलो चाँडो गर्छन ।
अमेरिकामा शरणार्थीको आगमन कटौती गर्ने ट्रम्पको योजना
असोज १६ गते, २०७७
अझै ‘फर्म’ मा आएनन् गृहमन्त्री, ओलीतिर छन् कि प्रचण्डतिरै ?
माघ २४ गते, २०७७
गुर्जो घरघरमा : किन खाने, कति खाने र कसरी खाने ?
असोज २५ गते, २०७७
पल शाहको मुद्दाको सुनुवाइ अर्को सातासम्मलाई स्थगित
धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले मतान्तर बढाउँदै
सुनचाँदीकाे मूल्य बढ्याे
नागरिकता विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी
पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित पानी पर्ने सम्भावना
भरतपुरमा मतान्तर रेणुको बढ्दै, रेणुको
पहाडी क्षेत्रमा चट्याङ हावा हुरीसहित वर्षाको सम्भावना
भारतले आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने
बोकोहरामले अपहरण गरेका ३२ जना मुक्त
क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रयुडेउलाई कोरोना संक्रमण